Zoma 11 Jiona 2021 – FJKM
Noteren’ny Jiosy hoforana ny Jentilisa rehefa nanaiky ho tonga Kristianina izy ireo. Ny anton’izany dia hahatonga azy ireo hitovy saranga amin’ny Jiosy voafora. Nihatsaravelatsihy Petera, Ka rehefa niaraka tamin’ny Jentilisa izy dia niara-nihinana taminy, rehefa nisy Jiosy naha-menamaso azy dia nihataka izy. Nanarin’i Paoly noho ny amin’izany izy. Ny tena Kristianina dia:
1- Mananatra izay tsy mijoro tsara (and 14)
Tsy mendrika ny maha-Kristianina araka ny fampianaran’i Paoly ny fihatsarambelatsihy. Sady te- ho tsara amin’ny Jentilisa sy ny Jiosy ity no nahatonga an’i Petera nihatsaravelatsihy. Toerana tsy tokony hisy eo amin’ny Kristianina izany. Izany rahateo no nananaran’i Paoly azy. Adidin’ny mino ny mifananatra, indrindra amin’izay hita fa tsy mijoro tsara amin’ny maha-Kristianina. Ny tena Kristianina dia tsy menamaso olona rehefa mananatra azy amin’ny mety ataony.
2- Manana an’i Kristy ao aminy (and 20)
Ny hoe : Kristy velona ao amin’ny mino dia Kristy ao amin’ny mino aloha. Satria ao amin’ny mino Kristy dia mamelona ny mino. Kristy mantsy rehefa ao amin’ny mino dia mamono izay rehetra tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra , ka manome fahavelomana vaovao. Rehefa manana an’i Kristy koa ny mino dia tonga manana antom-pisiana vaovao tonga mahalala ny fandaharan ‘Andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao .Ny tena kristiana dia velomin’i Kristy indray ka manana antom-pisiana mifanaraka amin’izay nikasan’i Kristy azy .
Ahoana no ahafantaranao fa ao amin’i Kristy isika ?